Thola amanye amasiko athakazelisayo eChina | Izindaba Zokuhamba
Bhuka izimoto eziqashisayo
USusana Garcia | | China, General
La Isiko lamaShayina lingenye yezindala kunazo zonke emhlabeni futhi futhi enye yezinto ezibanzi kakhulu futhi eziyinkimbinkimbi. Akunakwenzeka ukumboza konke lokhu okusho ngamagama ambalwa, kepha sizoqala nje ngamasiko athandwa kakhulu amaShayina ngokungangabazeki avuse ilukuluku lezivakashi emhlabeni wonke. Amanye ngamasiko agujwa amakhulu eminyaka futhi leli siko lihlala lisimangaza ukuthi sibadala kangaka futhi sihluke kakhulu kwesethu.
Sizokwazi amanye amasiko aseChina lokho kuyingxenye yesiko labo futhi mhlawumbe sesikuzwile. Ngaphambi kokuvakashela noma yiliphi izwe kubalulekile njalo ukubuza ngamasiko namasiko alo ukuze ufike nombono wokuthi yini esizoyithola.
1 Unyaka omusha waseChina
2 Umkhosi Wezibani
3 Udrako waseChina
4 Umcimbi wetiye waseChina
5 Ukugqoka kwendabuko kwamaShayina
6 Amaholide endabuko
Unyaka omusha waseChina
Wonke umuntu uzwile ngoNyaka Omusha WamaShayina ngoba bawugubha ngezinsuku ezehlukile kunomhlaba wonke. Kuyisiko elidonsela amehlo abaningi, ngoba emhlabeni jikelele kugxilwe kuDisemba 31 njengokuphela konyaka ukuqala ukubala omunye unyaka, kanti eChina akunjalo. Vuliwe I-China ilawulwa yikhalenda yenyanga, unyaka uqala ngosuku lokuqala lwenyanga engahluka unyaka nonyaka. Kungakapheli izinsuku ezingama-45 ngemuva kwenjikalanga yasebusika nezinsuku ezingama-45 ngaphambi kokufika kwentwasahlobo. Ngokusobala uma kuqala unyaka, amaShayina kumele avule iminyango namawindi awo ukuze kuphume unyaka owedlule enze indlela yakho konke okusha okusazokuza.
Ngemuva kwezinsuku eziyi-15 zonyaka omusha u-e odumile umkhosi we-lantern omangalisayo ezingxenyeni ezihlukene zaseChina. Kulo mkhosi, yonke into igqoke amalambu avamile aseChina esiwabone kaningi futhi akhanyiselwe ukugcwalisa konke ngokukhanya nombala. Ukuqeda imikhosi yoNyaka Omusha, kwenziwa imiboniso enezimpawu ezifana nodrako futhi kubanjwa imibukiso kwesinye isikhathi efaka isilwane esilawula uphawu lwezinkanyezi ngalowo nyaka.
El Udrako waseChina uyisilwane esingokwesiko esingokomlando saseChina. Futhi kuyingxenye yamanye amasiko ase-Asia futhi inezingxenye ezahlukahlukene zezinye izilwane ezinjengezimpondo zenyamazane, impumulo yenja, isikali senhlanzi noma umsila wenyoka. Kakade ngesikhathi sobukhosi bakwaHan udrako ubonakala njengengxenye yesiko, emakhulwini eminyaka adlule. Ngokuhamba kwesikhathi ibilokhu ithola amandla ahlukahlukene futhi ihlobene nokulawulwa kwesimo sezulu njengemvula. Iphinde yaba uphawu lwegunya lombuso. Yiba noma kanjani, sonke sihlobanisa udrako namasiko amaShayina namuhla.
Umcimbi wetiye waseChina
Uma sikhuluma ngomcimbi wetiye sivame ukucabanga ngeJapan, kepha eChina lesi siphuzo naso sibaluleke kakhulu emasikweni abo. Kubhekwa njengesiphuzo esingumuthiKamuva yaqhubeka yamukelwa yizigaba eziphezulu ukuze ekugcineni ibe wumkhosi. Kusetshenziswa ama-teapot amathathu kulo mcimbi. Kowokuqala amanzi abilisiwe, kowesibili amaqabunga ashiywa ukuthi afake kuthi kowesithathu kuphuzwe itiye.
Ukugqoka kwendabuko kwamaShayina
Izembatho zingaba enye yamasiko amaShayina athandwa kakhulu. Kunezingcezu eziningi zezingubo ezikhonjwe ngokucacile ngesiko lamaShayina. I- I-qipao iyisibonelo esihle, iyisuthi eyodwa eyayikade inemikhono emide futhi yayinganciphisi kangako. Isetshenziswa kaningi ngombala obomvu, oletha inhlanhla. Njengokulangazelela ukwazi ukuthi kunemibala ethile enqatshelwe yalezi zingubo ezinjengophuzi negolide okwakuhlobene nombusi, oku nsomi okwakungokomndeni wasebukhosini, okumhlophe okwakuyizwi lokulila noma elimnyama elalibhekwa njengombala okweletwayo ukungathembani.
Ngokungeziwe kuNyaka Omusha oshiwo ngenhla waseShayina noma uMkhosi weLantern omnandi, kuneminye imikhosi ebalulekile eChina okufanele uyiqaphele. I- Umkhosi weQinming noma Usuku Lwemiphefumulo Yonke ngolunye usuku olubalulekile kubo. Kugujwa ekuqaleni kuka-Ephreli ukuhlonipha okhokho ngokuletha iminikelo nempepho emathuneni nasemathempelini. I-Moon Festival noma i-Mid-Autumn Festival nayo igujwa ngosuku lwenyanga yesishiyagalombili egcwele, lapho ikhanya kakhulu. Zibungazwa emadolobheni kanti indikimba igxile enyangeni, kunezibani, amalambu, imihlobiso kanye nemibhikisho. Kubuye kube yiholide lapho kudliwa khona amaqebelengwane eNyanga, amakhekhe agcwalisiwe alungiselelwe lo mcimbi ngokukhethekile.
Ingabe ufuna ukubhukha umhlahlandlela?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Amasiko eChina
Gcina igama lami, i-imeyili kanye newebhusayithi kulesi siphequluli ngokuzayo lapho ngiphawula.
Ngifuna ukuthola okunikezwayo nezindleko zokuhamba ku-imeyili yami
Thola izindaba ku-imeyili yakho
Joyina i-Actualidad Viajes mahhala futhi uthole izindaba zakamuva mayelana nezokuvakasha nokuvakasha ku-imeyili yakho.
4 Nina Mahhotela
Ukuqashwa Kwemoto Yami
Thola okunikezwayo nezisulu